Shiinaha 3D Deep embossed biyuhu isku darka WPC Hollow Decking saarayaasha iyo shirkado | Lihua
3D Deep Embossed Biyo isku dhafan WPC Hollow Decking
Qiimo:$ 2.35 / M
Midabka:Dhuxul, caleen khariidad, alwaax cas, Kafee, iwm ama la habeeyay
Waqtiga Lead:10-18 MAALMOod
2.9m, 3.6mor loo habeeyay
Barkadda dabaasha, Baarkinka, iwm
Technology Tiknoolajiyad cusub oo 3D embossing WPC dabaqa qurxinta banaanka ah, hagaajinta qurxinta. Tiknoolajiyada wax lagu duubo ee 3D waa farsamo xardho oo dusha sare ah. Dabaq kasta wuxuu la mid yahay farshaxan, jawiga farshaxanka iyo shahaadada muuqaalka ayaa si weyn loo hagaajiyay. Kordhinta 3D-ga 'Classical 3D' waa horumarin weyn oo lagu arkay dabaqyada alwaax-caag ah, oo kaliya laguma xardhi karo baandooyinka laakiin sidoo kale waxay taageeri karaan astaamaha bilowga ciyey.
P Dhaqanka wpc decking isku dhafan way fududahay in lumiyo hadhuudhka dusha sare, qurxinta super embossed waxay sifiican uga shaqaysaa wax kasta oo alwaax isku dhafan ah, waa mid dabiici ah oo soo jiidasho leh, sifiicnaan u sii yaraanta iyo xoqida oo adkaysi u leh.
Lihua 'super superbobo' Qurxinta WPC waxay leeyihiin dhammaan faa'iidooyinka dhaqanka decking isku dhafan , weli waa la hayaa: biyuhu, UV-diidka, u adkaysiga cimilada, ladagaalanka sunta, kahortaga cayayaanka, dayactirka hooseeya, adeega muddada dheer iwm. dusha sare.
Hore: Bixinta degdegga ah ee Qurxinta WPC Qalabka - Bannaanka UV Dib-u-celinta Biyuhu WPC Jaranjarada Bixinta - Lihua
Xiga: 3D xardhay alwaax dab-damis ah oo isku dhafan oo WPC gidaarka ah
Q1: Waa maxay mabda'a naqshadeynta muuqaalka sheygaaga? Waa maxay faa'iidooyinka?
Q2: Maxay yihiin farqiga u dhexeeya badeecadaada asxaabtaada?
Q3: Waa kuwee shaqaalahaaga R & D? Waa maxay aqoontu?
S4: Waa maxay wax soo saarkaaga fikradda R & D?
Q5: Maxay yihiin tilmaamaha farsamo ee alaabtaada? Hadday haa tahay, maxay yihiin kuwa gaarka ah?
S6: Shahaadooyin noocee ah ayaad ku gudubtay?
S7: Shahaadooyin noocee ah ayaad ka gudubtay?
S8: Macaamiilkee ayaad ku dhaaftay kormeerka warshadda?
S9: Muxuu yahay nidaamka wax iibsigaagu?
S10: Waa maxay heerka alaab-qeybiyeyaasha shirkaddaadu?
Deep Emboosed qurxinta isku dhafan
Qurxinta WPC, Qurxinta banaanka ee WPC, alwaax decking isku dhafan, Gogosha WPC, Bannaanka WPC decking, Dabaqa WPC,